ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ၊ အိန္ဒိယသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Gautam Mukhopadhaya အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ၊ အိန္ဒိယသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Gautam Mukhopadhaya အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ ၁၅း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် Kett Electric Laboratory နှင့် Japan Development Service Co., Ltd မှ Mr. N YOSHIDA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် Kett Electric Laboratory နှင့် Japan Development Service Co., Ltd မှ Mr. N YOSHIDA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌...
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် Kett Electric Laboratory နှင့် Japan Development Service Co., Ltd မှ Mr. N YOSHIDA ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌...
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် EU ဌာနခွဲ၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Philipp Dupuis ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် EU ဌာနခွဲ၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Philipp Dupuis ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် World Food Programme မှ Deputy Country Director ဖြစ်သူ Mr. Naoe Yakiya ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် World Food Programme မှ Deputy Country Director ဖြစ်သူ Mr. Naoe Yakiya ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
၁၀ ရက်နေ့ ၁၅း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဝန်ကြီးရုံး အစည်း အဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် World Food Programme မှ Deputy Country Director ဖြစ်သူ Mr. Naoe Yakiya ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၅း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဝန်ကြီးရုံး အစည်း အဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
International Jewellery and Watch Expo 2015 Mandalay” ပြပွဲ